10 faa’iidooyin ah oo caafimaad oo ay leedahay caleenta cambbaddu - Horn Future
Waxaa la og yahay in mangadu ay tahay boqoradda midhaha khudaarta tooska loo cuno,dhamaan qof kasta uu jecel yahay, mid ka samaysta casiirka cabitaanka ama mid cuna ba .. laakiinse wali ma is weydiisay marna ba arrinta ku saabsan faa’iidooyinka ay leeyihiin caleemaha cambbadu?
Sida laga soo xigtay warbixin uu faafiyay website ka “Bold Sky”,oo ku takhasusay arrimaha caafimaadka,ayaa waxa lagu sheegay in caleenta cambbada ay ku jiraan dhowr dawooyin ah oo gaar ah,iyada oo sababtu tahay caleemahan oo hodan ku ah maadooyinka cuntada ee caafimaadka leh sida vitamin da (enzymes, flavonoids iyo antimicrobial )ka.
Waxa looga faa’iidaysan karaa caleemaha cambada in biyo lagu fixiyo/kariyo oo laga faa’idaysto dareereha hadhay, ama la engejiyo/qalajiyo oo la ridqo, kadibna loo isticmaalo sida budada.
Caleemaha cambada waxa ku jira 10 faa’iidooyin oo gaar ah oo daawooyin ah, oo dhab ahaana aanad ogayn iyaga waxana kamid ah, kuwan soo socda:
1 – Waxa ay hoos u dhigaan cadaadiska dhiiga
Caleemaha cambbadu waxa ay kaa caawiyaan hoos u dhiga cadaadiska dhiigga iyo xoojinta xidida dhiig-mareenada,waxana xeel-dheerayaasha nafaqadu ay kula talinayaan bukaan qaba dhiiga karka inay doorbidaan inay cabaan hal koob oo ah caleenta cambbada oo biyo lagu fixiyay/kariyay maalintii si loo yareeyo cadaadiska dhiigga oo loogu suggo heerka wanaagsan.
2 – Waa qayb kamid ah daweeynta cudurka macaanka iyo sido kale ka hortaggiisa
Caleemaha cambbada waxa ku jira maadooyinka “tannins” iyo “anthocyanin”, kuwaas oo ka caawiya daweeynta dadka qaba cudurka macaanka ,waxa sidoo kale xeel-dherayaashu ay kula talinayaan dadka in ay cabbaan hal koob oo ah caleenta cambbada oo biyo lagu fixiyay/kariyay si ay uga hortaggaan in uu haleelo cudurka macaanku.
3 – Waxa lagu daweeyaa dhibaatooyinka neefsashada
Inta badan dhibaatooyinka la xidhiidha habka neefsashada waxa dhici karaysa in lagu daweeyo cabbitaanka caleenta cambbadda oo la kariyey, bukaanada ka cabanaya xanuunada neefta, jidhka uu kasoo muuqdo casaanku ee uu sababo,infection ka, dhaawaca iyo bararku waxay dareemi doonaan raysasho wanaagsan marka ay cabbaan hal koob oo ah caleemaha cambbada oo la kariyay.
4 – Waxa lagu daweeyaa xanuunka/laxawga dhagaha
Ma ka cabanaysaa xannuun/laxawga dhagta? waxa qayb wayn oo kamid ah daweeyntan ay taalaa caleenta cambbada.Waxa ay kuu suuro galini caleentan cambbada oo la kariyay,la sifeeyay oo la qaboojiyo,ka dibna loo isticmaalo in lagu shubo dhibco dareera ah dhagta,in uu qofku dareemi doono in ay leeyihiin saamayn sixir ah leh taas oo baabi’inaysa gabi ahaan xanuunka/laxawga.
5 –Waxa lagu daweeyaa gubashada
Waxa dhici karta in si degdeg ah loogu daweeyo gubashada iyadoo la kaashanayo caleemaha cambbada,waxa la gubi qaar kamid ah caleemahan kadibna si toos ah loogu isticmaali dambaskeega iyada la marinayo goobta jidhka kamid ah ee ay soo gaadhay gubashadu.
6 – Waxa lagu daweeyaa dhibaatooyinka la xidhiidha acidka loo yaqaano (uric acid)
Caleemaha cambbada waxaa loo arkaa inay waxtarka u leyihiin daweeynta cudurka(gout) ee ay sababto maadada (uric acid)ka oo ku badata dhiiga,waxana uu yahay nuuc kamid ah kuwa ku dhaca kala-goysyada,iyada oo ay dhici karto in la cabbo maalin walba hal koob oo ah caleemaha la kariyey ee cambbada si ay uga caawiso yareeynta heerka(uric acid)ke ee ku jira dhiigga.
7 – Waxa lagu daweeyaa kacsanaanta ama isku buuqida
Hal koob oo caleemaha la kariyay ee cambbada waxa uu kaaga filan yahay in uu yareeyo kacsanaanta iyo in uu baabi’iyo welwelka,waxana uu xasiliyanayaa dareemayaasha isaga oo ku siinaya raaxo badan iyo nasasho.
8 –Waxa ay baabi’iyaan dhagaxaanta kalyaha.
Xaaladdan oo kale waxa aad sameeyn kartaa inaad engejiso/ qalajiso caleemaha cambbada oo aad ridiqdo, kadibna aad ku walaaqdo/qasto biyo oo aad cabto caloosha oo madhan,cabitaankan waxa uu kaa caawinayaa in uu hab dabiici ah u baabi’yo dhagaxaanta kalyaha.
9 -Waxa lagu daweeyaa cuna xanuunka
Caleemaha cambbadu waxa ay kaa caawiyaan in lagu daaweeyo cudurada cunaha ,iyada oo xaaladdan la gubayo qaar kamid ah caleemaha cambbada kadibna la nuugayo qiiqa ka baxayqa iyada ,taas oo siinaysaa raaxo badan oo raysasho ah cunaha.
10 – Waxa ay daryeelaan nadaafadda ilkaha
Waxa loo isticmaali karaa caleemaha cambbada oo la kariyay si loo baabi’iyo neefta xun ama qudhmuun ,waxa sido kale lagu daweeyn karaa dhibaatooyinka la xidhiidha ilkaha iyo ciridka.
« Piracy was never eradicated from Somali waters: Experts	» Jacfar Cabdulraxmaan oo caan ku ahaa akhriska Quraanka oo dhintay isaga oo toos u akhrinaya